Faah-Faahin dheeraad ah oo kasoo baxeysa Weeraro goor dhow oo caawa ajh ka dhacay Magaalada Muqdisho
Warar dheeraad ah oo kasoo baxaayo Iska hor imaad ku dhawaad Laba saac qaatay oo gor dhow ka dhacay Magaalada Muqdisho, ayaa sheegaya inuu u dhexeeyay Ciidamo ka tirsanaa Dowlada Federaalka Somalia iyo Kooxo hubeysnaa.
Iska hor imaadka ayaa waxa uu ka dhacay Agagaarka Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho, waxa uuna ka bilowday ka dib markii Kooxdaasi hubeysneyd ay weerar culus ku qaaden dhisme ku yaala agagaaraha Xarunta Hay'adda UNDP, oo ku dhow Aadan Cadde Airport.
Dhismaha la weeraray ayaa waxaa la sheegayaa inuu degnaa Taliye Ku-Xigeenka Hay'adda Nabad Suggida iyo Sirdoonka Qaranka Somalia gaar ahaan Laanta Gobolka Banaadir C/fitaax Shaawey.
Ciidamada Taliye Xigeenka Nabadsugida ayaa waxa ay sameeyen iska cabin, iyadoona markii hore lagu garaacay Hubka culus oo lagu jahwareeriyay, wallow markii dambe ay soo gaaren Ciidamo ka tirsanaa Nabadsugida oo gurmad ah.
Wararkaasi Khilaafsan ayaa waxa ay sheegayaan in sidoo kale Weerar lagu qaaday Hooyga Cabdi Ileys oo ah Ganacsade Soomaaliyeed, halka warar kalane ay Tibaaxayaan in Weerarla lagu qaaday guri halkaasi ku yiilay oo lagu keydinaayay Hub sharci daro ah, halkaasina uu ka dhacay iska caabin ay sameynayeen Kooxahaas.
Weli Dowlada Federaalka kama aysan hadlin wararka is khilaafsan ee kasoo baxaayo weerarka walow, warar hoose uu sheegayo in weerarka lagu wada qaaday C/fitaax shaawey iyo Ganacsade Cabdi Ileys oo hal dhismo wada degan
Dhanka kale, Jawiga ayaa waxa uu iminka yahay mid degan, balse warar hoose oo aan halkaasi ka heleyno ayaa sheegaya in Khasaaro xoogan uu halkaasi ka dhashay, iyadoona ay iminka halkaasi ku sugan yihiin Ciidamada Nabad ilaalinta.